musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Zvibvumirano zvinodzikiswa muBangkok sezvo nhamba dzeCOVID dzichidonha 30%
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vatengi zvino havachade kubayiwa jekiseni zvizere uye / kana kupasa bvunzo yeCOVID-19 kuti vadye munzvimbo dzekudyira uye mumaresitorendi munzvimbo dzvuku-dzvuku.
Bangkok inoderedza zvirambidzo zve COVID-19 sezvo huwandu hwehutachiona hutsva hwadzikira.
Vatengi veresitorendi havachadi kuve vakazara jekiseni kuti vadye mukati.
9 pm-4am curfew icharamba iri panzvimbo hazvo.
Nehutachiona hutsva huri kudonha makumi matatu kubva muzana mumasvondo maviri apfuura iyo Public Health Ministry nevamwe vanobatika vakabvunzwa neMutungamiriri weThai General Prayuth Chan-ocha kuti vauye nezviyero zvekuona kukanganiswa kwazvakaitwa nenhamba yehutachiona.
Vatengi havachazoda kubayiwa jekiseni zvizere uye / kana kupasa bvunzo yeCOVID-19 kunodya munzvimbo dzekudyira uye mumaresitorendi munzvimbo dzvuku-dzvuku, sekuzivisa kwekupedzisira muRoyal Gazette yeThailand, yakashuma Bangkok Post.
Chiziviso ichi chakapokana nezvakataurwa kare maresitorendi ari kuda kuvhurwa anozodiwa kudzora mabasa ekudyira vachengeti vakazara uye / kana avo vakapasa bvunzo dzeCOVID-19 neketi yekuongorora yeantigen vasati vapinda.
Pamwe pamwe nekurerutsirwa kweimwe COVID-19 curbs iyo yakatsigirwa neCentre ye COVID-19 Situation Administration (CCSA), maresitorendi uye mamwe mabhizinesi akati wandei ari kuda kuvhura, zvisinei iyo 9pm-4am curfew icharamba iri munzvimbo, nepo zvese vashandi vanokumbirwa kushanda kubva kumba kusvika Sept 14.
Kuungana kweruzhinji kwevanhu vasingasvike makumi maviri neshanu kwevanhu kuchabvumidzwa zvakare munzvimbo dzvuku-dzvuku, kunyangwe nemvumo kubva kuzviremera.
In Bangkok, zvikoro zvichabvumidzwa kutangazve kuraira mukati mevanhu, chero zvichizadzisa zvimiro zvakatemwa nebazi redzidzo nebazi redzidzo yepamusoro, sainzi, tsvagiridzo pamwe nehunyanzvi.
Kutanga nhasi runako salons uye ekugera zvitoro zvichavhurwa zvakare, kunyange pasina kufamba-ins kuchatenderwa. Spas uye masaja parlors, zvakadaro, zvinogona chete kupa tsoka tsoka.
Zvakare, kufamba kwepakati-kwematunhu kubva munzvimbo dzvuku-dzvuku hakuchazotadziswa. Ndege dzichabvumidzwa kutangazve mabasa evafambi, chero zvigaro zvichingokwana 75%, Dr Taweesilp vakadaro.
Sega, iyo National Hutano Kuchengetedza Hofisi (NHSO) yakakoka vashandi vemuzvivakwa zvekutora kuti vatore bvunzo yemahara yeCOVID-19 pakati paAugust 31 naGunyana 3 kunzvimbo hombe yehurumende muBangkok iyo inokwanisa kugadzirisa vanhu chiuru chimwe nemazana mashanu zuva rega rega.